ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ စန်းရှာမြို့ မဟာထေရကဿပရိပ်သာ မြေသန့်မင်္ဂလာ နှင့် သိမ်သမုတ်ပွဲ - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ စန်းရှာမြို့ မဟာထေရကဿပရိပ်သာ မြေသန့်မင်္ဂလာ နှင့် သိမ်သမုတ်ပွဲ
Posted by ukkmaung on August 16, 2012 at 5:35pm
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ စန်းရှာမြို့ မဟာထေရကဿပရိပ်သာ
မြေသန့်မင်္ဂလာ နှင့် သိမ်သမုတ်ပွဲ (18.8.2012 ~ 19.8.2012)
တရုတ်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း (CMBA) 中緬南傳佛教協會
ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာ အသိပေး နှိုးဆော်လွှာ
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ စန်းရှာမြို့ မဟာထေရ ကဿပ ရိပ်သာတွင် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ဆရာတော်ကြီးများ ကြွရောက်ကာ မြေသန့်မင်္ဂလာနှင့် သိမ်သမုတ်ပွဲဆင်နွဲကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကြွရောက်လာမည့် ဆရာတော်များ….
၁။ မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဗန်းမော်ဆရာတော်
၂။ မလေးရှားနိုင်ငံ ပီနန်မြို့ ဓမ္မိကာရာမကျောင်း ပီနန်ဆရာတော်
၃။ မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်တိုင်း သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော် ဦးဣဒ္ဓ္ဓိဗလ
၄။ မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်တိုင်း သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ အကျိုးတော်ဆောင် ဆရာတော် ဦးကုဏ္ဍလ
၅။ မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်တိုင်း သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ တွဲဘက် အကျိုးတော်ဆောင် ဆရာတော် ဦးနရိန္ဒ
၆။ မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့ သရက်တောတိုက် မှန်ကျောင်းဆရာတော် ဦးပညာဇောတ
၇။ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ တိပိဋကကျောင်း ဆရာတော် ဦးသြဘာသာဘိဝံသ
၈။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့ ဗုဒ္ဓ္ဓရံသီကျောင်း ဆရာတော် ဦးသီလိဋ္ဌ
၉။ စင်ကာပူနိုင်ငံ သာသနာ့ရံသီ မြန်မာကျောင်း ဆရာတော် ဦးတိလောက။
၁၀ ။စင်ကာပူနိုင်ငံ သာသနာ့ရံသီ မြန်မာကျောင်း ဆရာတော်ဦးစန္ဒဝံသ
၁၂။ကနေဒါနိုင်ငံတိုရန်တိုမြို့မဟာဓမ္မိကာရာမကျောင်း ဆရာတော် ဦးနန္ဒသီရိ
၁၃။ ကနေဒါနိုင်ငံ တိုရန်တိုမြို့ မဟာဓမ္မိကာရာမကျောင်း ဆရာတော် ဦးပညာဇောတ
၁၄။ ကနေဒါနိုင်ငံ ဗန်ကူးဗားမြို့ ဗုဒ္ဓ္ဓရံသီကျောင်း ဆရာတော် ဦးဃောသက
၁၅။ ကနေဒါနိုင်ငံ စစ်စကာတွန်မြို့ မေတ္တာဝိဟာရီကျောင်း ဆရာတော် ဦးသြသဓ
၁၆။ အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့ ဝိသုဒ္ဓ္ဓါရုံ ဓမ္မရံသီကျောင်း ဆရာတော် ဦးပါမောက္ခ
၁၇။ ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက်မြို့ ချူလာလောင်ကွန်တက္ကသိုလ် ဆရာတော် ဦးကောဏ္ဍညာဘိဝံသ
၁၈။ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ နန်းထိုမြို့ ဖားအောက်တောရကျောင်းဆရာတော် ဦးသောပါက
၁၉။ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ နန်းထိုမြို့ ဖားအောက်တောရကျောင်းဆရာတော် ဦးညာဏာစာရ
၂ဝ။ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ ကျုံးဟိုမြို့ တရုတ်မြန်မာကျောင်း ဆရာတော် ဦးနန္ဒဝံသ
၂၁။ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ ကျုံးဟိုမြို့ တရုတ်မြန်မာကျောင်း ဦးပညာဒီပ
၂၂။ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ ကျုံးဟိုမြို့ တရုတ်မြန်မာကျောင်း ဦးသောဘိတ
၂၃။ ထိုင်ဝမ် နိုင်ငံ ကျုံးလိမြို့ ရတနာဝါသ ကျောင်း ဆရာတော် ဦးဥက္ကံသ
၂၄။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ ရတနာဒီပကျောင်း ဆရာတော် ဦးကုသလ။
၂၅။သြစတေးလျားနိုင်ငံစစ်ဒနီမြို့ သာသနာ့ဓဇကျောင်း ဦးနန္ဒိယ။
၂၆။စင်္ကာပူနိုင်ငံ ဓမ္မဥယျာဉ်ကျောင်း ဦးပဏ္ဍဝါစာရ ။
၂၇။ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံကျုံးဟိုမြို့ တရုတ်မြန်မာကျောင်း အရှင်နေမိန္ဒ။
ကြည်ညိုဖွယ်ရာ ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ….
(၁၄.၈.၂ဝ၁၂) နေ့တွင် ဆရာတော်ကြီးများ ထိုင်ဝမ်အရောက် ကြွရောက်လာပါမည်။
( ၁၅.ဂ.၂ဝ၁၂ - ၁၉.ဂ.၂ဝ၁၂ ) အထိ အောက်ပါ သာသနာ့ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ကြပါမည်။
၁။ (၁၈.၈.၂ဝ၁၂)ရက် နံနက် (၉း ၀၀) နာရီ စန်းရှာမြို့ မဟာထေရ ကဿပ ရိပ်သာတွင် မြေသန့်မင်္ဂလာ စတင်ဆောင်ရွက်ပါမည်။
၂။ ဆက်လက်၍ ကျုံးဟို တရုတ်မြန်မာ ဘုရားကျောင်းသို့ သံဃာကုန် ပြန်ကြွပြီး၊ (၁ဝး၃၀) နာရီတွင် အားလုံးစုပေါင်း၍ နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ်ပါမည်။ (မိမိတို့် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဆွမ်းဟင်း တစ်ခွက်စီ ယူဆောင်၍ ကိုယ်တိုင် လာရောက် လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ များများ ချက်ပြီး ယူလာလျှင် ပိုကောင်းပါသည်။)
၃။ (၁၈.၈.၂ဝ၁၂)ရက် ည (၇း ၃၀) တွင် ကျုံးဟို ကော်ကျုံး ဓမ္မာရုံတွင် ဗန်းမော်ဆရာတော်မှ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း တရားဓဓ္မများ ချီးမြင့်ပါမည်။
၄။ (၁၉.၈.၂ဝ၁၂) ရက် နံနက် (၉း ၀၀) နာရီ စန်းရှာမြို့ မဟာထေရ ကဿပ ရိပ်သာတွင် သိမ်သမုတ်ပွဲ မင်္ဂလာ ဆင်ယင် ကျင်းပပါမည်။
၅။ (၁၉.၈.၂ဝ၁၂) ရက် နံနက် (၁ဝး ၀၀ မှ ၁၁း ၀၀) နာရီ စန်းရှာမြို့ မဟာထေရ ကဿပ ရိပ်သာတွင် နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ်ပြီး၊ နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ကြကာ တရားနာယူ၊ ရေစက်ချ၊ အမျှဝေကြပါမည်။
၆။ (၁၉.၈.၂ဝ၁၂) ရက် ညနေ (၅း ၀၀) နာရီ ကျုံးဟိုမြို့ ဟွာရှင်ကျဲ ဈေးလမ်း တလျှောက် ပြည်တွင်း ပြည်ပ သံဃာတော် (၂၅)ပါးတို့ကို ဆွမ်းဆန်စိမ်း လောင်းလှူ ပူဇော်ကြပါမည်။ (မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဝတ္ထု ပစ္စည်းများ၊ နဝကမ္မများ ပူဇော် လောင်းလှူနိုင်ပါသည်။
၇။ (၁၉.၈.၂ဝ၁၂) ရက် ည (၇း ၃၀) တွင် ကျုံးဟို ကော်ကျုံး ဓမ္မာရုံတွင် ဗန်းမော်ဆရာတော်မှ တရားဟော၊ ရေစက်ချ အမျှဝေကြပါမည်။
၈။ (၂ဝ.၈.၂ဝ၁၂) ရက်တွင် မြန်မာပြည်သို့ ပြန်လည် ကြွရောက်ကြပါမည်။
မှတ်ချက်။ ။ စန်းရှာမြို့ မဟာထေရ ကဿပ ရိပ်သာ မြေသန့်မင်္ဂလာ သိမ်သမုတ်ပွဲသို့ မည်သူမဆို ကြွရောက် ပူဇော် ကြည်ညိုနိုင်ပါသည်။ လိုက်ပါလိုသူများ တရုတ်မြန်မာ ဘုရားကျောင်းတွင် တစ်ဦးလျှင်NT (၁ဝဝ)ဖြင့် ကြိုတင် စာရင်းပေးသွင်း နိုင်ပါပြီ။ (၁၉.၈.၂ဝ၁၂)ရက် နံနက် (၇း ဝဝ)တိတိတွင် ကျုံးဟို တရုတ်မြန်မာ ဘုရားကျောင်းရှေ့၊ ဆဲဗင်း အလဲဗင်းဆိုင်နားမှ စတင် ထွက်ခွါပါမည်။
Busကားတောင်အောက်မှာရပ်ပါမည်။ ငယ်ရွယ်သူများ၁၀မိနစ်ခန့် လမ်းလျှောက်၍ တောင်ပေါ်တက်ရ ပါမည်။ အသက်ကြီးသူများကိုကားငယ်များဖြင့်တောင်ပေါ်သို့ကြိုပေးပါမည်။ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် Bus ကားနှင့်လာလိုပါက ကျင်အန်းဘူတာမှBus 908 နှင့် 921 Bus ကားစီး၍ တက္ကစီကားနှင့်တောင်ပေါ်တက်လို့ရပါသည်။ (တောင်ပေါ်တွင်ကားပါကင်အလွန်ကျဉ်းပါသည်။)ကားငယ်များကြိုပို့ယာဉ်အလှူ-လှူဒါန်းလိုကလှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ အထူးအစီအစဉ်
၁။ (၁၅.၈.၂ဝ၁၂) ရက် 花蓮 慈濟 ကျောင်းသို့ ကြွရောက်ကြပါမည်။
၂။ (၁၆.၈.၂ဝ၁၂) ရက် 高雄 佛光山 ကျောင်းသို့ ကြွရောက်ကြပါမည်။
၃။ (၁၇.၈.၂ဝ၁၂) ရက်中和 南山放生寺 ကျောင်းတွင် အနေကဇာတင်၍ သိမ်သမုတ်ကြပါမည်။
၄။ (၁၇.၈.၂ဝ၁၂) ရက် ညနေတွင် ပြည်တွင်း ပြည်ပ သံဃာတော်များ စန်းရှာမြို့ မဟာထေရ ကဿပ ရိပ်သာသို့ ကြွရောက်၍ သီတင်းသုံးကြပါမည်။
၆။ စန်းရှာ ရိပ်သာတွင်--အပတ်တိုင်း သောကြာညမှ စ၍ စနေ တနင်္ဂနွေ တရားစခန် ဖွင့်ထားပါသည်
တရုတ်မြန်မာ ဘုရားကျောင်း ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း ၊
မြန်မာပြန်အသင်း၊ တရုတ်မြန်မာ ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးအသင်း။ထိုင်ဝမ်၊
灑淨安座 暨 結界戒壇 典禮
主辦單位：新北市中緬南傳佛教協會 聯絡人:總幹事 謝子能
電話：02-2940-2646 秘書處 倪煥芳(老五)